Marka Kobaca Macnaheedu Yahay Balaadhinta Suuqa, Sida Si Guul Ah Loo Sameeyo | BehMaster
Bogga ugu weyn/Content Suuq/Marka kobacdu ka dhigan tahay ballaarinta suuqa, sida loo sameeyo si guul leh
Marka kobacdu ka dhigan tahay ballaarinta suuqa, sida loo sameeyo si guul leh
Kobaca ganacsigu had iyo jeer waa shay wax ku ool u ah shirkadaha intooda badan laakiin waxay noqon kartaa dhibaato haddii aadan haysan xeelad aad ku maareyso habkan.
Shirkado aad u badan ayaa u wajaha kobaca iyaga oo aan si taxaddar leh oo cabbiran u fahmin waxa ay rabaan in ay ku gaaraan ballaarintan.
Natiijo ahaan, istaraatijiyad fican oo suuq geyn ah ayaa muhiim u ah ganacsiyada doonaya inay ku guuleystaan ​​yoolalkooda badan.
Abuuritaanka qorshe noocaan ah wuxuu u baahan yahay in si taxadar leh loo fahmo waxa uu matalo iyo sida aad u dhexgelin karto yoolal iyo habraacyo kala duwan nidaamkan qorsheyn ee gaarka ah.
Si aad wax badan uga fahanto, sii wad wax akhriska! Halkan, waxaad arki doontaa:
Waa maxay Ballaarinta Suuqa Istaraatiijiyad?
A Ballaarinta Suuqa Istaraatiijiyadu waa hab ka caawiya shirkadaha inay koraan marka ay horeba u balaadhiyeen intii suurtogalka ah kanaalada jira.
Istaraatiijiyadani waxa ay diiradda saaraysaa koowaad waa in la hubiyo in dhammaan suuqyadaada hadda ay hore u buuxiyeen oo ay ku qanacsan yihiin alaabtaada iyo adeegyadaada sida loo soo bandhigay.
Xeeladahani waa inay tixgeliyaan dhammaan hantidaada, alaabtaada hadda jirta iyo kuwa cusub, awoodaha xarumahaaga, iyo waxa suurtogalka ah ee suuqyada aan laga faa'iidaysan ee aad awood u yeelan karto inaad diirada saarto istiraatiijiyadaada hadda.
Qeexida kanaaladan iyo macaamiishaada cusub ee suurtogalka ah waxay kuu ogolaaneysaa inaad ballaariso hawlgalkaaga si taxadar leh oo waxtar leh.
Marka laga soo tago faa'iidadan, istaraatiijiyad Fidinta Suuqa ee wanaagsan waxay sidoo kale kaa caawineysaa inaad hubiso inaadan si degdeg ah u fidin dantaada.
Shirkado badan ayaa isku daya in ay si indho la'aan ah u ballaariyaan oo ay u riixaan suuqyo cusub iyaga oo aan waqti u qaadan si ay u fahmaan khatarta iyo abaalmarinta. Markaad haysato xeelad, waxaad naftaada siinaysaa fursadaha ugu wanaagsan ee guusha.
maxaad Ballaarinta Suuqa Xeeladaha waa Muhiim
Abuuritaanka xeeladaha Ballaarinta Suuqa ayaa bixiya tiro badan oo faa'iidooyin ah kuwaas oo ka caawiya ganacsiyada inay koraan.
Si fiican u fahamka dhammaan faa'iidooyinkan waa inay kuu fududeeyaan inaad go'aan ka gaarto haddii habkani adiga kugu habboon yahay iyo in kale.
Hubi inaad mid kasta oo ka mid ah faa'iidooyinkan u fiirsato oo si sax ah u miisaan ka hor intaadan dooran.
wanaagsan A Ballaarinta Suuqa Istaraatiijiyadu waxay dhimaysaa kharashyadaada iyadoo diiradda saaraysa alaabtaada iyo adeegyadaada halka laga rabo.
Tusaale ahaan, haddii aad haysato mootooyinka aad si weyn ugu iibisay dadka waayeelka ah, waxa laga yaabaa inaad ogaato in dadka waaweyni ay xiiseeyaan mootooyinkan isticmaalka maalinlaha ah.
Halkii aad si indho la'aan ah diiradda u saari lahayd cilmi-baaristaada iyo ballaarinta abuurista mootooyinka cusub ee dhammaan dhalinyarada qaangaarka ah, waxaad yareyn kartaa kharashaadka adiga oo ka codsanaya kuwa u muuqda inay xiiseynayaan.
Fikradda halkan waa in la balaadhiyo si macquul ah oo laga fogaado kharashaadka xad-dhaafka ah ee suuqa aan kaliya ku soconaynin jidkaaga.
Baahinta ganacsigu waa hab-raac khatar ah oo dabiici ah, kaas oo sababi kara dhibaatooyin badan inta uu faa'iido u leeyahay.
Si kastaba ha ahaatee, istaraatijiyad Fidinta Suuqa oo wanaagsan ayaa xisaabta ku dareysa khatarahaan oo waxay heshaa habab lagu dhimo darnaantooda, iyadoo la hubinayo in shirkaddaadu ay ahaan doonto mid xooggan oo ammaan ah.
Hoos u dhigista khatarahaaga habkan waa muhiim sababtoo ah waxay kaa caawinaysaa inaad iska ilaaliso nooca khaladaadka aan loo baahnayn ee ganacsiyo badan. Waxayna sidoo kale kaa caawinaysaa in aad hoos u dhigto fursada aad ku gali doonto khataro aan la filayn inta lagu jiro ballaarinta, dhibaatada ah in shirkado badan aysan si fudud ugu diyaargaroobin si ku filan.
Gaaro Fursadaha Ganacsiga
Mid aan leexleexad lahayn ama aan diiradda la saarin fidinta suuqa waxay u badan tahay inay kuu keento inaad seegto fursadaha ganacsi ee dhabta ah.
Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inaad ku sii fidayso hal suuq oo leh dhammaan agabyadaada oo ay u aragto inaadan suurtogal ahayn inaad ka faa'iidaysato suuq cusub sababtoo ah waxaa ka go'an xeelad kale.
Mahadsanid, tayo sare leh Ballaarinta Suuqa Istaraatiijiyaddu waxay kuu fududaynaysaa inaad hesho fursadahan ganacsi oo aad si gaar ah diiradda u saarto.
Sidan, waxaad awoodi doontaa inaad ku boodo isbeddeladan oo aad iska ilaaliso inaad si xad dhaaf ah u kordhiso naftaada meelaha aan macno u samaynayn baahiyahaaga ganacsi.
Hagaajinta Canshuurta iyo Faa'iidooyinka U Hogaansanaanta
Canshuurta iyo faa'iidooyinka u hoggaansanaanta hawlaha ganacsiga waxay kaa caawinayaan dhimista kharashyadaada waxayna kugu abaal-gudayaan qaadista tillaabooyinka habboon.
Si kastaba ha ahaatee, wanaagsan Ballaarinta Suuqa Istaraatiijiyaddu waxay kor u qaadi doontaa faa'iidooyinkan iyadoo kuu oggolaanaysa inaad raacdo xeerar kala duwan oo qeexaya.
Tusaale ahaan, waxaad wax badan ka qori kartaa balaadhintaada cashuurahaaga haddii aad isticmaasho xeelad raacaysa hab-raacooda.
Waxa kale oo aad si fiican u gaadhi kartaa u hoggaansanaanta habab kale oo kala duwan, sida tijaabinta badbaadada saxda ah iyo u hogaansanaanta FDA, adiga oo si sax ah u habayn kara habka balaadhintaada.
Sida Loo Sameeyo Istaraatiijiyad Guulaysata Sida uu qabo Habka Ansoff
Marka aad abuurayso istaraatijiyad Balaadhinta Suuqa, waa fikrad wanaagsan inaad raacdo Modelka Ansoff.
Fikradan waa qalab loogu talagalay in lagu caawiyo ganacsiyada ballaarinta oo u koraan si toos ah oo toosan. Caadi ahaan waxay isticmaashaa afar xeeladood oo kala duwan kuwaas oo ka caawinaya in habkan loo fududeeyo, oo ay ku jiraan:
Habkani waxa uu ka faa'iidaysanayaa alaabooyinka jira ee aad hore u haysatid waxana uu diiradda saarayaa kordhinta iibka aad hore ugu lahayd suuqaaga.
Caadi ahaan waa tallaabada ugu horreysa ee shirkadaha badankoodu qaadaan marka ay ballaarinayaan joogitaankooda suuqa.
Marxaladdan, waxaad abuuri doontaa badeecooyin cusub oo waxaad geli doontaa suuq aad horay ugu shaqeysay.
Badana, tallaabadani waxay isticmaashaa adeegyo ama shay la mid ah waxaad hore u bixisay laakiin leh balaadhin ama horumarin.
Inta lagu jiro marxaladan ballaarinta, waxaad bilaabi doontaa inaad gasho suuq cusub adoo isticmaalaya alaab aad horay u soo saartay.
Balaadhintan ku meel gaadhka ahi waxay caadi ahaan muhiim u tahay shirkadaha doonaya inay ka gudbaan marxaladahoodii hore ee korriinka.
Natiijada xeelado badan oo Suuqa balaadhinta ayaa ah kala duwanaansho. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku ballaariso suuqyo cusub oo leh badeecooyin cusub.
Sida aad filan karto, habkani waa kan ugu khatarta badan waana kan qaata shaqada ugu badan si loo fuliyo si sax ah.
Hoosta, waxa aanu ku dari doonaa dhawr tillaabo oo kaa caawin doona qorshaynta iyo fulinta mid kasta oo ka mid ah tillaabooyinkan.
Markaad raacdo tusaalahan oo aad hagaajiso balaadhintaada, waxaad abuuri kartaa istaraatiijiyad awood kuu siinaysa inaad gaadho dhulkaas dahabiga ah ee guusha suuqa - horumar joogto ah oo faa'iido leh..
Kordhi joogitaankaaga suuqa adiga oo diirada saaraya alaabadaada jirta oo kor u qaadaysa inta suuqa aad haysato.
Waqti ku bixi suuqgeynta alaabtaada, adoo diirada saaraya faa'iidooyinkooda iyo faa'iidooyinkooda. Waxaad markaa isku dayi kartaa inaad si qarsoodi ah oo taxadar leh u ballaariso meelo kala duwan adigoo isticmaalaya dhowr habab oo kala duwan, adigoo isku dayaya inaad ka faa'iideysato khaladaadka suurtagalka ah ee tartamayaashaada goobtan.
Samaynta Xeeladda Cilmi-baarista Suuqgeynta
cilmi-Market ayaa muhiim u ah mid kasta Ballaarinta Suuqa istaraatijiyad sababtoo ah waxay ku siinaysaa faham wanaagsan oo ku saabsan rabitaanka suuqa iyo baahiyaha.
Markaad si buuxda u fahamto wejiyadan, waxaad go'aansan kartaa inaad rabto inaad diirada saarto alaabtaada jirta ama aad bilowdo inaad ku balaadhiso goobo cusub oo leh alaab cusub. Hubi inaad u qaadatid hab macquul ah oo cabbiraya dhammaan dadaalladan.
Ku Balaadhinta Kanaalka Cusub
Hubi inaad si joogto ah u raadinayso inaad ku balaadhiso kanaalo cusub dhammaan koritaankaaga.
Kanaalka cusubi waxay ku siinayaan isku xidhka tiro aad u badan oo iib ah iyo la-hawlgalayaal ganacsi, taas oo kuu oggolaanaysa inaad kor u qaaddo khadkaaga hoose xitaa intaa ka sii badan..
Si la mid ah sida muhiimka ah, habkani wuxuu awood kuu siinayaa inaad sameyso xiriiro adag oo kicin doona koboc ganacsi oo dheeri ah oo kugu ilaalin doona tartan.
Dhageystayaasha summadaadu waxay ka kooban yihiin iibsadayaal suurtagal ah dhammaan suuqyada kala duwan, oo ay ku jiraan iibsadayaasha imaan kara, kuwa horeba wax uga iibsada, iyo dadka laga yaabo inay xiisaynayaan alaabada cusub.
Hubi inaad isticmaasho cilmi-baaristaada suuqa si aad u aqoonsato shakhsiyaadkan oo aad la shaqeyso iyaga oo isticmaalaya suuq-geyn xiiso leh, wacyigelinta warbaahinta bulshada, iyo tillaabooyinka kale ee ballaarinaya joogitaankaaga suuqa.
Diirada saarida Kobaca Brand
Calaamadeyntu waxay lama huraan u tahay ballaarinta suuqgeyn kasta, waxaadna u baahan tahay inaad joogteyso oo aad awood u yeelato summeyntaada si aad u guuleysato.
Hubi inaad ku balaadhiso astaantaada siyaabo macno u leh baahiyahaaga, sida ka faa'iidaysiga summadaada alaabada cusub, ku ballaadhinta fariimahaaga la-hawlgalayaasha cusub, iyo fiiro gaar ah u siinta fariinta hoose ee dhammaan isku dayada calaamadaynta
Kordhinta Iibka Alaabta Jirta
Looma baahna inaad iska indho tirto alaabtaada hadda jirta haddii aad horeba ula joogtid iyaga oo aad ku kalsoon tahay inaad gaadhi karto dhegaystayaal ballaadhan.
U fiirso horumarinta alaabtan si kasta oo aad awooddo, muujinta faa'iidooyinkooda, ku balaadhinta suuqyo kala duwan, ka faa'iidaysiga cusboonaysiinta alaabta ee ka dhigaysa mid waxtar leh ama faa'iido leh, ama qaadashada tallaabooyin kale oo macno kuu leh wakhtigaas.
Soo bandhigida Khadka Alaabada Cusub
Markaad suuqa soo gelinayso alaab cusub, waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad heshay baaris lagu sameeyay haddii ay jirto baahi loo qabo alaabtan, halka ay ku habboon yihiin suuqa aad diiradda saarayso, iyo khataraha ka iman kara.
Marka si sax ah loo sameeyo, nooca istaraatijiyad balaadhinta Suuqa ayaa isla markaaba bedeli doonta ganacsigaaga oo waxay kaa dhigi doontaa inaad ku guulaysato siyaabo aadan qiyaasi karin.
Sida aad arki karto, abuurista istaraatijiyad fidinta Suuqa waa faa'iido weyn marka si habboon loo wajaho.
Adigoo raacaya Qaabka Ansoff oo si wax ku ool ah u kordhiya kobacaada, waxaad ka faa'iidaysan kartaa isbeddellada soo jireenka ah ee suuqa. Sidan, waxaad ku faafin kartaa ganacsigaaga meel fog oo ballaaran.
Haddii aad xiisaynayso inaad wax badan ka ogaato habkan, ka daawo webinar-kayaga "Kobcinta qayb ganacsi oo cusub: sida loo sameeyo astaantaada mid ka soo horjeeda tartanka", oo leh Mark Organ!
Sida Looga Guulaysto Falanqaynta Tartanka Suuqgeynta Guud ahaan Raadinta & Bulshada